Wararka - Waa maxay wada-bixinta?
Co-extrusion, tiknoolajiyada ugu dambeysa ee qoryaha kaladuwan, tiknoolajiyaddan casriga ah ee horumarsan ayaa si wadajir ah loo soo saaray si asaasi ah, qalabkeeda dusha sare leh ayaa ah waxa siinaya guddi kasta waxqabad gaar ah oo ka sarreeya. dusha sare ma ballaadhi doono oo uma qandaraasayn doono sida kuwa kale ee isku dhafan, dhanka kale nuugitaankiisa kuleylka hooseeya macnaheedu waa cagaha qaawan ayaa jeclaan doona, oo lagu daray xasilloonida sare ee UV midabkeeda dabiiciga ah ayaa socon doonta sannado.
Iskuxirid ama looxyo daboolid ah ayaa ah looxyada jiilka labaad ee WPC. Waxaa loogu talagalay dabool kaas oo ku xidhan xudunta guddiga inta lagu jiro wax soo saarka. Process Hawsha wada-ka-bixidda waxay ku lug leedahay isticmaalka antioxidants, midabeeyeyaasha, iyo ka-hortagga UV si loo xiro xudunta.
Faa'iidooyinka taxanaha Lihua co-extrusion
Lihua's guddiga isku-dhafan wuxuu gaaraa midab aan dhammaad lahayn oo midab leh oo dhab ah, isbarbardhigga kaliya alwaaxda dabiiciga ah, tiknoolajiyadan casriga ah iyo casriga waxay u oggolaaneysaa isku-darka midabka cajiibka ah, oo bixiya mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee isku-dhafan.
Iyada oo ku saleysan khibrad warshadeed iyo aqoon baaxad leh, waxaan awoodnay inaan ku qancino ku dhowaad dhammaan baahiyaha kala duwan ee macaamiisha annaga oo siinayna decking Composite Co extrusion decking Qaybaha la siiyay ee qashinka waxaa lagu qiimeeyaa dhammaystirkooda wanaagsan, xooggooda sare iyo astaamaha kale ee gaarka ah.
Waxaan leenahay midab kala duwan waxay noqon kartaa ikhtiyaar, Waxaan u habeyn karnaa midabbo iyo cabirro kala duwan iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.Sidoo kale waxaad dooran kartaa qaab kala duwan oo muuqaal ah oo dusha sare ah.Muhiimadda ugu weyn, waxaan sameyn karnaa bacalor co-extrusion waxyaabaha WPC.This waxay ku siin kartaa ganacsi badan , adiga iyo macaamiishaadu waxaad kala dooran kartaan midab, taasi waxay kuu noqon doontaa dhibic iibin wanaagsan!
Afarta khadadka wadajirka ah ee isku xidhka wax soo saarka, waxaan hubin karnaa inaad waqtigaaga bixisid sidoo kale waxaan ku siin karnaa xulasho dheeraad ah adiga.Waxaan geyn doonnaa badeecooyinka nus dhammaadka ah meel gaar ah, marka daaweynta kadib ay dhammaato, waxaan uxirineynaa looxyadan sidii go'aanka.
Haddii aad xiiseyneyso tan, waad booqan kartaa warshaddeena.Waxaan si diirran kuugu soo dhoweynaynaa warshadeenna.
Qurxinta banaanka ee WPC, Dabaqa WPC, alwaax decking isku dhafan, Bannaanka WPC decking, Qurxinta WPC, Gogosha WPC,